श्रीमतीमाथि शंका लाग्छ ? यो तपाईंको रोग हो « Janata Times
श्रीमतीमाथि शंका लाग्छ ? यो तपाईंको रोग हो
समस्या- अहिले म ३६ वर्षको भएँ । हाम्रो विवाह भएको ७ वर्ष भयो । मैले विवाह गर्नुअघि केही वर्ष प्रेम गरेर उनलाई राम्रोसँग चिनेर विवाह गरेको हुँ । मलाई सम्झना भएसम्म हामीबीचको सयौं यौन सम्बन्धमध्ये २० देखि २५ पटकसम्मको समागम निकै रोचक र आनन्दमयी भएको थियो । त्यसपछि हाम्रो सम्बन्ध केवल औपचारिकजस्तो मात्रै हुन्छ ।
आजकाल उनी धेरै कर गरेपछि मात्र यौन सम्बन्धका लागि तयार हुन्छिन् । शुरु शुरुमा यो कुराले मलाई आश्चर्य लाग्ने गर्दथ्यो र आफैंलाई दोषी मान्थें । उनको मप्रतिको माया घटेको हो कि भनेर शंका गर्थे । धेरै समय बितिसक्दा पनि केही सुधार नभएकाले अब चाहिँ उनको अरु नै कोही यौन पार्टनर छ कि जस्तो लाग्छ ।